Tsara indrindra, Andro, volana ho an'ny varotra - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeForex SchoolBest Hours, Andro, Volana ny Varotra
Mahafinaritra fa ny doro dia tsena izay azo varotra manodidina ny famantaranandro, 24 ora, 5.5 andro isan-kerinandro, 12 volana isan-taona. Ny fanokafana ny tontolo andro ary ny ankamaroan'ny herinandro dia mitondra any amin'ny tsenam-barotra faran'izay betsaka kokoa noho ny zavatra hafa, ary manome ny mpivarotra avy manerana izao tontolo izao ny fahafahana hivarotra araka izay tadiaviny. Afaka manao varotra na kely fotsiny araka izay tiany izy ireo, mandritra ny ora fiasany, rehefa miasa na amin'ny misasak'alina.
Na izany aza, misy ny lesoka amin'ny fananana ny tsena dia misokatra 24-7. Tsara ny manana fahazarana hiasa amin'ny fotoana rehetra, fa olombelona ihany koa isika, izay midika fa tsy maintsy matory, mihinana na miala voly isika ary tsy afaka manara-maso ny toerantsika mandritra ny andro sy ny alina. Hisy foana ny fotoana tsy ampoizina na hitsambikina amin'ny vidiny izay hanohitra ireo toerana efa napetraka raha tsy manodidina isika. Voafetra ho an'ny olombelona izany, ary izany no antony anaovana forex amin'ny fifanakalozana ara-barotra miaraka amin'ny Expert Advisor (EA) izay mifanakalo ho antsika 24-7, na manakana izany dia tsara ny misafidy ny fotoana tsara indrindra hivarotra miorina amin'ny an'ny hafa. misy fotoana sy tetika lojika.
Ity lahatsoratra ity dia manandrana mandehandeha vetivety mba hividy, tapaka amin'ny ampahany telo:
Best andro ara-barotra
Ny volana tsara indrindra ho an'ny varotra
Ny fotoana tsara indrindra azo anaovana varotra
Na dia misy tsiranoka foana aza isaky ny fotoam-pivoriana dia tsy noforonina mitovy izy ireo: misy ny fotoana tsy miovaova tsy miovaova ny vidin'ny vidin-javatra sy ny fotoana rehefa miova. Ankoatr'izay, ny mpivady vola dia mampiseho hetsika isan-karazany mandritra ny fotoana sasany amin'ny andro ara-barotra mifandray amin'ny salan'ireo mpandray anjara amin'ny Internet amin'ny fotoana. Ao amin'ny ora 24 ora haingana ny fotoana tsena Forex dia manakiana ary ny fisafidianana ny fotoana tsara indrindra amin'ny varotra dia afaka manampy ny tombom-barotra azo avy amin'ny olona iray.
Ny fotoana ara-barotra tsara indrindra dia ny fotoana avo indrindra amin'ny habetsaky ny volavolan-dalàna sy ny volatility. Ny haavon'ny varotra dia midika fa maro kokoa amin'ny mpivarotra vola iray no novidina sy nivarotra ary ny vola miditra dia midika fa mihodina haingana sy mandroso haingana ny mpivady. Ny haavon'ny haavony sy ny tsy fahampian-tsakafo dia miteraka fihetsiketsehana lehibe mandritra ny fotoana fohy. Ankoatra izany, mihamitombo ny fiparitahana mandritra ny ora maoderina, ary ny fielezina ety dia midika fa ambany ny vidin'ny entana.
Andeha isika hijery ny latabatry ny fivoriana indray, mifantina manodidina GMT and EST:
Fotoana fisokafana fotoana fisakafoanana
Manokatra i New York ao amin'ny 8: 00 ao amin'ny 5: 00 pm EST (EDT)
Tokyo manokatra amin'ny 7: 00 pm mankany 4: 00 am EST (EDT)
Sydney manokatra amin'ny 5: 00 pm mankany 2: 00 am EST (EDT)
Londres navoakan'i 3: 00 am 12: 00 no mitana EST (EDT)
Raha tianao ho fantatra ny tabilao etsy ambony raha oharina amin'ny faritra maro, dia azonao atao ny manohy ity tranonkala ity: http://www.forexmarkethours.com/
Amin'ny fivoriana 4 (Londres, NYC, Sydney, Tokyo), ny tsara indrindra ho an'ny fivarotana dia ny fivorian'ny London (manga manga) ary NYC fivoriana (miloko mavo).
Fivoriana Eoropeana: 3 Am To 12 Midi EST
Raha jerena fa ny 34.1% isam-pivoarana manerantany no mitranga any Royaume-Uni (London) ary ny 7.5% iray hafa dia mitranga any amin'ny faritra manodidina an'i Frantsa, Alemana sy Danemarka, dia mora ny mahita hoe nahoana ny fivoriana Eoropeana no tsy tokony hohadinoina . Ny ankamaroan'ireo mpandray anjara amin'ny tsena dia nahatonga an'i Londona ho tsena mora indrindra manerantany ho an'ny varotra varotra. Ary mifandray amin'ny sehatra Aziatika sy Amerikana izy io. Ny olan'ny US Ny mpivarotra dia mety tsy maintsy mifoha aloha ry zareo (na mijanona ela be) mba hanangona fivoriana Eoropeana izay mandeha amin'ny 2 am ka hatramin'ny 12 pm EST. Mazava ho azy fa ity fivoriana ity dia tsara ho an'ny mpivarotra Eoropeana, ary tsy dia ratsy loatra ho an'ny mpivarotra Aziatika izay afaka manefa ny fivoriana Eoropeana mandritra ny takarivany (3: 00 PM ho an'ny mamatonalina, fotoana ao Hong Kong). Ny vola toy ny Euro, Pound Britanika ary Frantsa Swiss dia tena mavitrika mandritra ity fivoriana ity satria mpivarotra avy any amin'ny firenena eoropeanina mampiasa ny volany ao an-toerana amin'ny fifanakalozam-bola amin'ny fifanakalozana vahiny.
Raha jerena fa ny 16.6% isam-bolana maneran-tany no mitranga any Etazonia (NYC), ary ny ankamaroan'ny tsenam-bola ara-bola manerantany dia toa manara-maso ny fironana sy tarehimarika navoakan'ny Wall Street, dia mora ihany koa ny mahita fa Etazonia Ny fivoriana dia tena zava-dehibe. Ny ankamaroany dia afaka handrindra ity fivoriana ity, satria tsy mila mandeha amin'ny asa izy ireo mandritra ny andro. Ny Eoropeana anefa, dia tokony ho ireo no tokony hijanona amin'ny alàlan'ny fanatontosana ity fotoam-pivoriana ity, ary angamba efa tany am-pandriana ny Asiana.
Any ivelan'ny roa amin'ireo tsena roa tsara indrindra, misy “faritra mafana” roa amidy rehefa mivarotra ny tsena roa amin'ny fotoana iray (antsoina hoe fiakarana fivoriana). Ity overlap fivoriana ity dia maneho ny fotoana maha-be ny fahatongavany ary mitranga indroa:
Hoteran'ny Zone # 1: Fandrarahana US-Eoropa (8: 00 Am To Noon EST)
Ny fotoana mampidi-doza indrindra amin'ny varotra dia ny mpivarotra Eoropeana no mivarotra US mpivarotra amin'ny ora 4 ora mifanelanelan'ny roa tonta (8 ka hatramin'ny mitataovovonana EST). Fotoana iray itiavanana ny afovoan-varotra roa mavitrika indrindra eran'izao tontolo izao - raha mihidy ny fivoriana eoropeana ary US misokatra ny fivoriana. Varavarankely kely izy io nefa mavitrika, nefa ny mpivarotra vola sasany dia miantso ny «faritra mafana». Ity overlap ity koa dia nifanandrify tamin'ny famoahana ireo isa ara-toekarena lehibe. Noho ny fihoaram-pefy sy ny lanjany ara-toekarena, io vanim-potoana io dia maneho ny vanim-potoana lehibe indrindra sy ny fihetsehana eny an-tsena, ka diniho tsara izy ireo. Ny fifanakalozana EUR / USD sy GBP / USD dia hanome valiny tsara indrindra mandritra io fanenonana io.
Hoteran'ny Zone # 2: Fandrarahana Aziatika-Eoropeana (3: 00 Am To 4: 00 Am EST)
Amin'ny alina, manomboka amin'ny 3 am EST mankany amin'ny 4 AM EST, misy ora 1 dia mandalo eo amin'ny tsena Aziatika sy Eoropeana. Misy ihany koa ny isa manan-danja avy amin'ireo kaontinanta roa amin'izao fotoana izao. Tsy mahagaga, ny mpivady GBP / JPY dia nanjary tena tsy misy dikany amin'izao fotoana izao.
Rahoviana no tokony handrenesako ny ora?
Ny fotoana tsy dia misy dikany firy ny varotra dia ny faritra tena misy an'i Sidney sy Tokyo Sessions, izay endri-10 ora ora 5: 00 PM EST mankany 3: 00 AM EST. Raha tsy izany ianao scalping nandritra ity fivoriana ity, nanantena fa ny anao scalping Ny rafitra dia afaka manararaotra ny vola liam-bola faran'izay ambany, fotoana tsara hanaovana fialana sy fitsaharana. Ny volam-barotra dia tena marefo (mitovitovy) ary fironana sasantsasany izay mivoatra mandritra io fotoana io. Ny ankamaroan'ny mpivarotra Eoropeana dia efa nandry teo am-pandriana sy ny US Ny mpivarotra dia nody any amin'ny fianakaviany na efa nandry teo am-pandriana. Raha toa ka mifoha ianao ary manana ny maimaim-poana fotoana, mety ho fotoana tsara hiomanana amin'ny fanokafana ny fotoam-pitsarana Eoropeana.
Endriky ny Cool mba hampisehoana ny fivoriana fivarotana
Misy ny fanondroana mahafinaritra izay ahafahan'ny olona mitodika any amin'ny tabilao iray mba hahitana sary an-tsokosoko ny fizarana vanim-potoana ara-barotra, eo anilan'ny fantsom-piainan'io faritra io.
Fanamarihana: Tsy maintsy manondro ny GMT fanoherana ny anao broker ho an'ity famantarana miasa tsara. Raha tsy hainao ny momba anao GMT Afaka ampidinina, azonao atao ny manangona sy manatanteraka ireto manaraka ireto famantarana ao amin'ny tabilao:
Ny andro tsara indrindra
Forex dia ahafahantsika manefa ny andro 5.5 isan-kerinandro, anisan'izany ny alahady, saingy tsy midika izany fa manome fotoana mitovy ny fivarotana isan'andro. Andro maromaro kokoa no tadiavina amin'ny varotra, amin'ny resaka volombava sy pied, raha ny hafa kosa tsy dia tsara loatra. Ny fitsipiky ny ankiben-tanana momba ny andro isan-kerinandro dia ny fankalazana ny andro (Tuesday, Wednesday, Thursday). Koa raha te-handalo telo andro isan-kerinandro ianao, dia ho andro tsara indrindra izany.
Andro Tokony Hitandrina Mafy
Alahady dia rehefa mbola mankafy ny faran'ny herinandro ny rehetra, koa aza manantena hetsika be eto, raha tsy nisy fampandrenesana vaovao manakiana mandritra ny faran'ny herinandro. Izaho dia nahita fironana Ny fitohizan'ny fifampiraharahana na ny fiverenana amin'ny alahady dia miankina amin'ny zava-nitranga tamin'ny faran'ny zoma.
Alatsinainy - na dia efa nizotra nanomboka ny alahady aza ny varotra, ny alatsinainy dia mbola maneho ny tsy dia misy fantsom-pifandraisana noho ny telo andro eo ho eo. Mbola vao maraina izany ary mbola miandry ny vaovao ara-toekarena sy isa hivoaka mandritra ny herinandro ny mpivarotra. Matetika aho no mivarotra ny alatsinainy satria mety mbola tena mahasoa ary tsy mankahala ny tsy hahatanterahako ny fiandohan'ny fihetsiketsehana. Nefa miambena mba hanarenana fanitsiana manohitra ny fototra fironana ny Alatsinainy izay atsy aoriana kely ny alakamisy na alarobia. Mety hitarika any amin'ny varotra diso izany.
Zoma - ity dia antsasaky ny andro satria sahirana ny varotra mandra-pahatongan'ny 12: 00 hariva EST ary avy eo dia saika maty tamin'ny fihetsiketsehana mandra-pahatapitany ao amin'ny 5: 00 hariva EST. Mbola misy fotoana azo antoka ara-barotra izay hita mandritra ny tapany voalohany amin'ny zoma. Saingy tokony hitandrina ny iray: mety ho andron'ny fiverenana ao amin'ny lehibe izany fironana. Miompana indrindra amin'ny fiambenana ny ampahatelon'ny zoma, satria mety hidina any ambany ny habetsaky ny volany, ka miteraka fitomboany betsaka.
Ny andro hafa dia tokony hitandrina amin'ny:
Fanofanana tsy ara-dalàna - mitranga ny zoma voalohany amin'ny volana tsirairay ao amin'ny 8: 30 AM EST. Mety ho vanim-potoana tsy misy haingam-bola io varotra io, ary ny hetsika avy amin'ny whipsaw dia mety hanimba zavatra maro misokatra amin'ny fijanonana izany varotra izany amin'izao fotoana izao.
Zava-baovao lehibe indrindra - mety ho lahatenin'ny filohan'ny Fed izany, na ady na fampihorohoroana. Ireo andro ireo dia mety hanjavona mora tokoa ary mety ho voan'ny kapoka.
Holidays (indrindra fa ny fialantsasatra lehibe toy ny Jolay 4, Fisaorana sy Krismasy) - Ny mpivarotra vola lehibe rehetra dia fialantsasatra, koa aza manantena ny hivadika ny tsena. Amin'ny ankapobeny dia mihetsika amin'ny sisin-dàlana mandritra ireny fotoana ireny.
Ny taona manontolo dia azo zaraina amin'ny ampahatelony, manomboka amin'ny telo volana mampihoron-kiranitra amin'ny fahavaratra, ny volana faran'ny volana amin'ny fararano, ary ireo volana amam-bolana
Anao telo volana mahery (fahavaratra): Jona, Jolay, ary indrindra, Aogositra.
Ny fahadimy volana (Herinandro): Septambra, Oktobra, Novambra, ary Desambra.
Ny volana tsara dia tsara (ny lohataona amin'ny lohataona): Janoary, Febroary, Martsa, Aprily, ary Mey
Inona no Antony Ilàna Azy?
Ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra dia maneho ny famenoana ny volan'ny varotra, ary ny volana manaraka aorian'ireny vakansy ireny dia mampiseho fiverenana mamelombelona amin'ny fivarotana, toy ny orana aorian'ny hain-tany.
Ny hain-tany lehibe: Ny volana vakansy amin'ny fahavaratra amin'ny volana Jona, Jolay sy Aogositra
Ny angona fikarohana avy amin'ny S & P dia manondro fa ny volana amin'ny fahavaratra dia manome fiverenana malemy ho an'ny ankamaroan'ny tsenam-bola ho an'ny firenena maro any Eorôpa. Ilay famaritana tranainy fahiny nampiasaina nanerana ny varotra mivarotra tao Londres dia mivarotra ny May ary aleo 'mbola mitazona azy manokana, araka ny fanadihadiana nataon'ny S & P Indices. Izy io no efatra volana farany amin'ny taona izay manome ny ampahany betsaka indrindra amin'ny fiverenan'ny taona feno. Ny teoria ao ambadik'io fepetra io dia ny fahitana ireo volana fahavaratra mandritra ny fahavaratra na ny fahaverezana. Amin'ny fivarotana ny fananana amin'ny volana Mey, ary ny fanavaozana azy ireo raha tsy efa vita ny fahavaratra, miaro ny portfolio ianao ary mety hahatratra ny fiverenana tsaratsara kokoa. Amin'ny famakafakana ny fampisehoana isam-bolana amin'ny tsena iraisam-pirenena 16 ambin'ny folo ao amin'ny S & P Global Broad Market Index nandritra ny folo taona tamin'ny Janoary 2000 hatramin'ny desambra 2009, S & P dia nampiseho fa io varotra io tetika mbola mihazona tsara manerana an'i Eoropa.
Ho an'ny ankamaroan'ny firenena eoropeanina, ary koa ho an'i Etazonia, ny vanim-potoan'ny volana jona-augusta dia somary ratsy ihany. Ny vanim-potoana Jan-May teo aloha dia midika ho 3%, miaraka amin'ny ankamaroan'ny fandrosoana mitranga ao anatin'ny efatra volana farany amin'ny taona (Sept-Jan). Ny efatra volana farany dia mbola manan-danja indrindra ho an'ny fanomezana ny taona manontolo, ka midika izany fa na dia aorian'ny fahaverezan'ny fahavaratra aza dia mbola misy ihany ny fahafahana manatsara ny fiverenana.
August dia volana fahavaratra indrindra
Raha ny marina, August dia volana ratsy indrindra tamin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra:
August 2011 dia nampalahelo noho ny S & P 500, nilatsaka 10%.
August 2010 koa dia nampalahelo noho ny S & P, nilatsaka 4.5%.
August 2008 dia nandiso fanantenana tamin'ny S & P, nitombo 1% mialohan'ny nitrangan'izany.
Ny fahavaratra, indrindra fa ny volana Aogositra, no fotoana ratsy indrindra amin'ny fifanakalozana ara-barotra ara-panjakana any Eoropa amin'ny fialantsasatra sy Amerika Avaratra amin'ny fety. Izany dia miteraka fihenam-bidy sy vola be. Ny tsara indrindra tetika Soso-kevitra marobe dia ny mandeha fialan-tsasatra fotsiny ary manohy ny varotra rehefa tonga ny volana Septambra.
Matetika aho no nanao fanadihadiana nandritra ny fahavaratra ary nanenina izany. Miharatsy sy tsy ampoizina ny tsenam-bola.
Raha tsy maintsy mivarotra mandritra ny fahavaratra ianao, miomàna amin'ny asa an-tongotra. Manaova varotra rafitra mifototra (antsoina koa fironana tetikady fading). Amidio ny vola eo an-tampony, mividy any ambany, manasà ary avereno. Na zoom to a smaller frame time (M5 or M15) to trade the trends mini.
Na ho ela na ho haingana fironana paka, ary izany dia matetika avy hatrany Fetin'ny Asa fialan-tsasatra any Etazonia, samy maka aina ny rehetra ary ny fahavaratra dia tsy ofisialy intsony aorian'izany.
Volana amin'ny fahavaratra (septambra hatramin'ny volana Desambra) Manolotra ny vanim-potoana ara-barotra tsara indrindra, satria mihabetsaka ny fivarotan'ny toetr'andro
Ny antony mahatonga ny volana tsara ho an'ny varotra aorian'ny fahavaratra, nanomboka tamin'ny Septambra ka hatramin'ny volana Desambra, dia satria ireo volana ireo dia mampiseho fiatombohan'ny hetsika ara-barotra aorian'ny fialantsasatry ny fahavaratra. Raha tokony nifidy volana vitsy monja ny mpivarotra, dia ho izany no izy.
Toerana fitsangatsanganana faharoa: Faharoan'ny Desambra
Misy ny "Volana Ririnina" amin'ny fivarotana miadana. Ny tapany faharoa amin'ny volana Desambra dia manana tahiry ambany tahaka ny volana Aogositra. Ny herinandro manodidina sy ny Krismasy lasa teo dia miadana toa ny volana Aogositra sy ny fiandohan'ny volana Janoary dia tsy dia tsara loatra izany.
Mbola mendrika foana ny hetsika amin'ny ririnina
Aorian'ny fialan-tsasatra faharoa amin'ny volana Desambra, misy ny fiaraha-miasa ara-barotra izay maharitra hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny Mey, 2011. Mety tsy ho toy ny orinasa mahery vaika toy ny iray amin'ny fararano izy io, nefa manome volana maro ahafahana manao izany.
Ny fotoana tsara indrindra isam-bolana
Best Hours ny ara-barotra
Endri-tsetroka hentitra mba hampisehoana ny fivoriana fivarotana
Zava-baovao lehibe indrindra